गभर्ननरले बार्षिक ३३ लाख ३३ हजार ५ सय ३८ रुपैया तलब
गभर्नर को पद आर्कषक मानिन्छ । हामीले चलाउने हरेक नोटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति चानचुने पक्कै हुँदैनन् । त्यसैले गभर्नर पद पाउनकै लागि राजनीतिक भागदौड चल्छ । ग्लामरस पद गर्भनरको तलव चै कति होला ?
भवन उद्घाटनको अवसरमा बिहीबार मिलनचोक स्थित आफ्नै जमिनमा नवनिर्मित अत्याधुनिक भवनबाट बुटवलकै पुष्पलाल पार्कमा हाल सञ्चालनमा रहेको बैंकको शाखा कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरिएको हो ।
रेष्टुरेन्टको ठगी धन्दा : किन भिराइन्छ ग्राहकलाई भ्याट र सेवा शुल्क ?
तपाईंले सर्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा निर्धारित भाडा बाहेक सह–चालकले आफुखुसी ‘सर्भिस शुल्क’ असुल्छ ? ‘भ्याट’ वापतको रकम माग्छ ?
संसारकै सबैभन्दा ठुलो सेल डे ११.११ सेल सुरु
नेपालको बृहत अनलाइन शपिङ साइट दराजको संसारकै सबैभन्दा ठुलो सेल डे ११.११ सेल सुरु हुँदैछ । एक दिने सेल आयोजना रातको १२ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आइएमई बैंकको १४९औं शाखा ओखलढुङ्गाको रमाइलो डाँडामा
ओखलढुङ्गा– ग्लोबल आइएमई बैंकले बुधबार प्रदेश नं. १ को ओखलढुङ्गास्थित सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ११ रमाइलो डाँडा बजारमा नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ ।
बसमै फ्री वाइफाई, आरामदायी सिट, वातानुकूलित सुविधा, पिउने पानी, टेलिभिजनमा फिल्म, अनलाइन टिकेटिङ । पछिल्लो समय काठमाडौंबाट देशका प्रमुख सहरहरूमा सञ्चालन हुने लामो दुरीका बसले थपिरहेका सुविधा हुन्, यी ।
‘दशै खर्चबाट बचत गरी जोडकोषमा लगानी गरौं’ः सिइयो श्रेष्ठ
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । सनराइज क्यापिटलद्वारा व्यवस्थापन, सनराइज बैंकद्वारा प्रवद्र्धित ‘सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्ड’ असोज ८ देखि निष्कासन गरेको छ । आठ करोड पचास लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि निष्काशन र विक्री खुल्ला गरिएको हो ।